Pastor Van Te – FGA Tulsa
Tag: Pastor Van Te
Admin / June 10, 2018 / FGA File
သခင်ယေရှုနှင့် စာတန်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခြင်း-Pastor Van Te
Admin / February 18, 2018 / FGA File
သခင်ယေရှုနှင့် စာတန်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခြင်း The Direct Encounters of Jesus With Satan စာတန်၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ယေရှု၏အသက်ကို ရန်ရှာမှု များရှိခဲ့သည်။ ဥပမာ- ကလေးများကို ဟေရုဒ်သတ်ခြင်း၊ နာဇရက်မြို့တွင် ချောက်ကမ်းပါးမှတွန်းချရန်ကြံခြင်း (လု ၄း၂၈-၂၉)၊ ဂါလိလဲအိုင်ပေါ်က မုန်တိုင်း (လု ၈း၂၂-၂၅)၊ ငါဖြစ်သည်ဟု ပြောသောအခါ သတ်ရန်ကြံခြင်း (ယော ၈း ၄၈-၅၉) စာတန်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခြင်းများ တောထဲတွင် စုံစမ်းခြင်း ၃ ခု (မဿဲ ၄း၁-၁၁၊ မာကု ၁း၁၂-၁၃၊ လု ၄း၁-၁၃) ရှိမုန်ပေတရုထဲမှ စာတန် (မဿဲ ၁၆း၂၁-၂၃၊ မာ ၈း၃၁-၃၃) ယုဒရှကာယုတ်ထဲမှ စာတန် (မဿဲ ၂၆း ၁၄-၁၆၊ မာ ၁၄း […]
Admin / January 15, 2018 / FGA File
ဘုရားသခင်ထံမှ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခိုးယူရန်နှင့် လူတို့အား ဘုရားသခင်ကို ကျောခိုင်းစေရန် ပုန်ကန်သူစာတန်၏ ဦးတည်ချက် စာတန်၏အခွင့်အာဏာ ဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားဖြစ်- ၂ကော ၄း၎ အာဒံက ပေးသောကြောင့် ဤလောကကို သူရပြီး နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်း မတိုင်မီအထိ သူ၏နိုင်ငံ တွင် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ လုကာ ၄း၅-၆။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏နိုင်ငံတွင် မရှိတော့ပါ။ မှောင်မိုက်နိုင်ငံကို အုပ်စိုးသူသည် အလင်းနိုင်ငံကို မအုပ်စိုးနိုင်ပါ။ ကောလော ၁း၁၃။ ယောဟန် ၁၃း၂၆-၃၀။ စာတန်၏နယ်ပယ် ဧဖက် ၆း၁၂ ကောင်းကင်အရပ် (ဒုတိယ ကောင်းကင်) ဧဖက် ၂း၂ အာကာသ (ဒုတိယ ကောင်းကင်) ယောဘ ၁း၇ မြေကြီးပေါ် စာတန်နိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံ နိုင်ငံ၊ မြို့၊ ရွာ ဝါဒကြီးများ (Ideologies) မကျဆင်းမီရာထူးမျိုးဆက်ရှိ […]
နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်း အမှုတော်-DELIVERANCE MINISTRY #Jan 7,2018
Admin / January 14, 2018 / FGA File
နိဒါန်း ယေရှုက တပည့်တော်များကို အပ်နှင်းခဲ့သည့်အမှု တွင် (၁) နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောခြင်း (၂) လူနာကို ကျန်းမာစေခြင်း (၃) နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်း တို့ပါဝင်သည်။ မဿဲ ၁၀း၁၊ ၇-၈။ လုကာ ၉း၁-၂။ ဤအမှုသုံးခုသည် အသင်းတော်၏အခြေခံအုတ် မြစ်ဖြစ်သည်။ ထိုအုတ်မြစ်ကိုဖယ်ရှားလျှင် အသင်းတော်လည်း ရွေ့သွားလိမ့်မည်။ အသင်းတော်၏အခြေခံအုတ်မြစ်လိုနိယာမကို ဖယ်ရှားပါက အသင်းတော်သည် ဘုရားသခင် ကြံ ရွယ်ထားသည့် ပုံစံနှင့် လွဲချော်သွားလိမ့်မည်။ အသင်းတော်သမိုင်းတွင် နတ်ဆိုးနှင်ထုတ် ခြင်းအမှု တာတူလျန် (Tertullian, AD. 200) – အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထံမှ နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခဲ့ရပုံကို စာအုပ်တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ နတ်ဆိုးစကား- ငါ့ပိုင်နက်ထဲဝင်လာလို့ တရားနဲ့အညီ ငါ လုပ်တာ။ အိုရီဂင် (Origen, AD. 250, in Against […]
Admin / October 16, 2016 / FGA File
ပရောဖက်-တမန်တော်ဆိုင်ရာ ချီးမွမ်းခြင်း၏တန်ခိုး ယုဒ ဦးစွာ ချီတက်ရမည်။ တမန်တော်ဆိုင်ရာနှင့် ပရောဖက်ဆိုင်ရာ ချီးမွမ်းခြင်း ဘုရားသခင်၏ရာသီအသစ်ထဲသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်း “သင့်အသက်တာသည် သင်၏ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း အဆင့်ထက်ပို မမြင့်တက်နိုင်ပါ ´´ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း မပြောင်းလဲပါက အသင်းတော် များသည် ၀ိညာဉ်ရေး၌ ရှေ့မတိုးနိုင်ပါ။ ယုဒ ဦးစွာ ချီတက်ရမည်။ (တောလည် ၁၀း၁၄-၁၆) ယုဒ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ချီးမွမ်းခြင်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှေ့ဆက်တိုးစေလိုသည့်အခါတိုင်း ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် စတင်ရတတ်သည်။ ယုဒအမျိုး (ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန်အမျိုးနှင့်တကွ) ရှေ့သို့ ဆက်ခရီး သွားပြီးမှသာ တဲတော်ကို ရွှေ့ကြသည်။ ဣသခါ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ပရောဖက်ဆိုင်ရာ ဖြစ် ( ၁ရာချုပ် ၁၂း၃၂) ဇာဗုလုန်မှာ ဆုကျေးဇူး (သို့) ဂုဏ်ပြုခြင်း ဖြစ် (ကမ္ဘာ ၃၀း၂၀) တိုက်ပွဲဝင်သောအခါလည်း […]